Uthando njalo ephelezelwa ayiphulule futhi angiqabule, ngoba ngaleyo ndlela sibonisa isimo sethu sengqondo maqondana abanye. Yini kiss esizothile sempilo yakho? Phela, ngokuqinisekile unamandla owokuqala owawunika ingane nabazali bakhe. Anikhumbuli yini? Bacele. Akukho lutho kunokubuthwa hug kuqala wamanga wokuqala, ngubani okuniké ingane yakho.
Uma ungazange ube abazali, okokuqala akukhona emnene ngokwanga wena nika othandekayo wakho. Ngeshwa, ngokuhamba kwesikhathi ubudlelwano phakathi kwabantu abanothando ukushintsha, uthando nokuqonda mutual isiba ezincane. Kuneminye imizwa - uthando, ukunakekela nomunye, njll Okufanele ukwenze kuleli cala? Vele musa baqhubeke ngendoda.
Nowesifazane wokuqala ngomshado, njengoba sazi, entanyeni. Ngakho uma umlingani wakho kancane azikhohlwa mayelana uthando nesisa, ukukuqabula kuphela njengoba isandulela ubuhlobo obuseduze, sekuyisikhathi ukuthatha izinto ezandleni zabo siqu. Emini, woza umnike emnene ngokwanga izikhathi ezimbalwa, ngoba lapho uwe nje othandweni, bese wamanga kayikhulu ngosuku, kwesokudla? Kushintshe ini? Ukuze uthando namanje uhlala ezinhliziyweni zenu, udinga ukwazi ukuze uvuse wakhe up. Ungabi lazy avuke ukubona naye amyise umsebenzi, futhi ngaphambi kokukhululwa kwe-ukwanga kwakhe, ukuqabula simfisela usuku oluhle. Believe me, uma umshado selupholile, bekungelona umuntu iwayini.
Ngo abameleli besifazane kufanele kube ukubekezela kakhudlwana lokucabanga nelokusungula. Yenza umqondo walondoloza Ningazishiyi zodwa zichayeke oshade naye, mnike wonke ngokwami, njengoba esisodwa. Yiqiniso, izingane kudingeka, Nokho ziqondiswe, lokhu akusho ukuthi kufanele bayakhohlwa ubuwena futhi ushiye isigamu sintula.
Kodwa emuva kuncike yethu. A kiss mnene efana uhlobo a isakramente uthando, evuswa imizwa yakhe yothando sonke. Ngakho uma ufuna ukugcina uthando iminyaka eminingi, ungakhohlwa mayelana nenqubo. Khumbula lezo zikhathi ezivusa amadlingozi abesifazane ukuqabulana ngempoqo ukuvala amehlo abo futhi ikhuphuka phezu komhlaba? Ngakho kungani ukuphika ngokwakho lokhu futhi?
Ngempilo omdala bayazi eze kithi iphupho uthando. Othile cabanga ngalokho kuyoba ikusasa abathandekayo babo, umuntu uyaphupha lomshado wakhe, futhi ezinye kiss lokuqala. Okuningi ukufundisa amabhayisikobho, kodwa akekho ukhuluma onjani imizwa inika mnene ngokwanga kothandekayo. Lokhu injabulo, futhi injabulo, futhi flying phezu komhlaba ...
Kiss kungaba ukuveza imizwa yakho. Ngakho, uma umuntu anesibindi futhi "iluma", ngokuqinisekile umuntu oshade naye okuthize ukuphukula. Uma efuna wena, kuyoba abanothando kakhulu kiss. Kodwa uma ubuhlobo imibhangqwana kukhona ukuvumelana nenjabulo, khona-ke bayokuzila kiss yothando ejule kunayo yonke emhlabeni, okuyinto ngezinye izikhathi kunzima ukukhohlwa.
Ungabi namahloni ukukhombisa imizwa yabo phambi kwabanye, yebo, kulandela ngesilinganiso. A kiss mnene esihlathini - kakhulu yona ukubonakaliswa kothando, uma kukhona abantu abaningi, ngoba izinhliziyo onothando ingaba kuhlale isikhathi eside ngaphandle uthando.
Emshadweni kakhulu ithenda ngokwanga kuwuphawu nokunakwa naye, futhi kulandelwe kungakhathaliseki emva lokhu walala lenkazana kumbe hatshi, into eyinhloko ukuthi touch enjalo sezindebe noma umphimbo komunye kwesigamu wathi enye indlela wamthanda. Futhi abantu besilisa, okuye abangakayitholi owesifazane oyifunayo, ukuqabulana wakhe, uzama ngaleyo ndlela ukukhulula okungenani ingxenye uthando lwakhe futhi epholile. Okungukuthi, kulesi simo, izindebe othandekayo touch kuba uhlobo isinxephezelo. Nokho, lokhu akusho ukuthi kufanele ahlupha intombazane simpofu, sonke leso sikhathi afune izinto ngenkani kwabanye kiss.
Ungesabi ukukhombisa imizwa yabo. Ngokuqinisekile abazali bakho noma ogogo nomkhulu uyojabula kakhulu uma wena kiss njalo lapho uhlangana. Nokuthandwa!
Indlela ukukhetha ski nesigqoko sokuvikela ikhanda?